बुवाले आफ्नै छोरीलाई गरे जबरजस्ती करणी, आमा छोरी रुँदै मिडियामा (भिडियो सहित) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > बुवाले आफ्नै छोरीलाई गरे जबरजस्ती करणी, आमा छोरी रुँदै मिडियामा (भिडियो सहित)
बुवाले आफ्नै छोरीलाई गरे जबरजस्ती करणी, आमा छोरी रुँदै मिडियामा (भिडियो सहित)
admin March 9, 2020 भिडियो, समाज	0
हाम्रो समाजमा अहिले सोच्नै नसक्ने घटनाहरु हुन थालेका छन् । घटनाहरूकाे प्रकृति हेर्दा लाग्छ आफ्ना छोरीचेलीहरु आफ्नै परिवारका सदस्यवाट पनि असुरक्षित छन् । अझ आफैले जन्मदिएकी छोरीलाई बुवाले लामो समय देखि अ’नैतिक काम गरेको सुन्दा आमाको मन कस्तो भयो होला ? त्यस्तो कुराको शंका पाएपछि आमाले छोरीलाई बारम्बार सोधिन् । धेरै समय सम्म त्यस्तो काम भएको थाहा पाएपछि आमाको हो’स ह’वास नै उ’ड्यो ।
कपिलबस्तुमा एकजना बाबुले लामो समय देखि छोरीलाई यौ’न शो’षण गर्दै आएको कुरा बाहिर आएको छ । बुवाले बारम्बार अनैतिक काम गरेर ग’र्भ नरहोस् भनेर उनले ग’र्भ निरोधक औ’षधी खु’वाउने गरेका थिए । हिन्दु धर्ममा छोरीलाई लक्ष्मीको रुपमा पुजा गर्ने चलन छ । तर पुज्नुपर्ने छोरीलाई आफ्नै बाबुले एक पटक होइन बारम्बार त्यस्तो काम गरेका हुन् । आमाले यो कुरा सत्य नभए हुन्थ्यो भन्ने मनमा लिँदै छोरीलाई तिम्रो शरिर छोएको मात्र हो की त्यस्तो कुनै अ’नैतिक काम समेत गर्नुभयो भनेर आमाले सोध्दा छोरीले आमा एक पटक होइन धेरै पटक यस्तो भइसक्यो भनेर सुनाउँदा आमाले टेकेको जमिन भा’सियो ।
५ वटा छोराछोरीको बुवाले ति मध्य एउटा छोरीलाई त्यस्तो काम गर्ने गरेका रहेछन् । उनका ४ छोरी र १ छोरा छन् । बुवाले पहिला रिक्सा चलाउँथे । एक दिन उनले आफ्नो श्रीमतीलाई भने अव हामीले आम्दानीको श्रोत बढाउनुपर्छ त्यसैले तिमी पसल गर भनेर श्रीमतीलाई पसल गर्ने सामान ल्याइदिए । घरमा जवान छोरीहरु थिए । त्यसैले घरको काम छोरीहरुले गर्छन म पसल गर्छु भनेर भनेर उनी दिनभर घर बाहिर हुन थालिन् । एउटा शुक्रवार उनको छोरीले अध्यारो अनुहार बनाएर बसेकी थिइन् । छोरीलाई खाना खाएर स्कूल जा अनि खाजा खाने पैसा लिएर जा भनेर अराइन् ।
९ कक्षामा पढ्ने १७ वर्षकी छोरीले विहानमा घरको खाना खाएर स्कूल जाने गर्थिनन् । तर त्यो दिन आमाले घरकै खाना खाएर जा भनेर अराइन् । आमाले खान आइज भनेर बोलाउँदा पनि नगएपछि बुवाले टाउकोमा समातेर भान्छातिर धकले त्यसपछि उनी भान्छामा गएर नराम्रो संग रोइन् । उनले कान्छी छोरीलाई दिदीलाई स्कूलमा केही भएको भए मलाई आएर भन है भनेर भन्दा कान्छी छोरीले हजुर नभएको बेलामा बाबाले ढोका र झ्याल बन्द गरेर दिदीलाई के के गर्नुहुन्छ भनेर सुनाइन् । त्यसो भनेर कान्छी छोरी पनि रुँदै स्कूल गइन् ।
कान्छी छोरीको कुराले उनको मन भक्कानियो । तर केही भन्न सकिनन् । छोरीहरु स्कूलवाट घर आएपछि उनले कान्छी छोरीलाई फेरी राम्रो गरी सम्झाएर सोधिन् । आमाले त्यसरी सम्झाएपछि कान्छि छोरीले बाबाले लामो समय देखि त्यस्तै गर्दै आउनुभएको छ हामीले भन्न सकेका थिएनौं । कान्छीले त्यसरी सुनाउँदा अर्की छोरीले पनि दिदीलाई बुवाले त्यसै गरेको सुनाएपछि उनले त्यो कुरा बाहिर ल्याएकी हुन् ।
आफै क्यान्सर पीडित भएर पनि दिनरात विरामीकाे सेवा खटिएकि डा. खरेल हामी वीच रहनुभएन, हार्दिक श्रद्धाञ्जली!
छैन होलीकाे राैनक! यस्तो सुनसान काठमाण्डौं, ब्यापारी भन्छन् यसपाली छैन रौनक (भिडियो हेर्नुस्)
म माथि बिनयले जे गरे त्यो एकदिन सबै कुरा छरपस्ट हुन्छ – सपना (भिडियो सहित)